Ama-podcasts angcono kakhulu ka-2021 azokuxhuma | Iforamu yeselula
Ama-podcasts angcono kakhulu ka-2021 azokuxhuma
U-Ignacio Sala | 21/11/2021 12:00 | Internet
Uma ukhathele ukulalela umculo ngenkathi uhamba, ukushintshela kumaphodikasti kuzoba yinto ecebisa ngayo yonke indlela. Okwamanje, singathola inani elikhulu lamaphodikasti, inombolo engaba namandla uma ungakangeni emhlabeni we-podcasting noma ufuna ukwandisa inani lamaphodikasti ovame ukuwalalela.
Uma ufuna ukwazi ukuthi yini i- ama-podcasts amahle kakhulu, ngikumema ukuthi uqhubeke nokufunda, lapho uzothola khona ama-podcast kuzo zonke izihloko ezingaba khona.
1 I-podcast yefilimu nethelevishini
1.1 Umzila we-Endor
2 I-podcast yamahlaya
2.1 Iplanethi Cuñao
2.2 Akekho owazi lutho
3 I-podcast yobuchwepheshe
3.2 Izindaba ze-IPhone
3.4 Sula i-X
4 I-podcast yomlando
4.2 UCasus belli
5 I-Mystery podcast
5.1 Iminyaka eyinkulungwane yesine
5.2 Izinsuku Ezingajwayelekile
5.3 Umlindi Wemfihlakalo
6 Lalela amaphodikasti
I-podcast yefilimu nethelevishini
Njengoba sineminyaka engu-12 silandela imibhobho, asiyitholi enye yezinhlelo ezindala kakhulu ngeSpanishi emhlabeni we-podcasting ehlobene nefilimu nethelevishini nalapho, ngaphezu kwalokho, amahlaya anendawo.
Ku-orbit ye-Endor uzothola ukuhlaziya okuphelele kwakho kokubili kwefilimu ne-TV yakamuva ekhishwe kanye nemikhiqizo ephawula ubuntwana babaningi. boomers (njengoba sebesibiza kanjalo manje). Ngokuya ngemuvi noma uchungechunge, i-podcast ingahlala kufikela kumahora angu-7.
Uma uthanda ama-podcasts anamandla anenani elikhulu ledatha ehlobene nefilimu nomabonakude, le podcast ilungile. I-Endor's orbit iyatholakala ku-iVoox ngokukhethekile.
USomandla uyi-podcast yanyanga zonke eqondiswa u-Arturo González-Campos ephelezelwa umqondisi wamafilimu uRodrigo Cortés, umbhali uJuan Gómez-Jurado kanye noJavier Cansado (Faemino y Cansado)
Kule podcast bagxile ekukhulumeni ngabaqondisi, kunamafilimu athile, nakuba kukhona nezindikimba zabalingiswa basenganekwaneni ebhayisikobho. USomandla uyatholakala kuwo wonke amapulatifomu e-podcast.
Uma ngegama, usuvele ucabanga ukuthi abafana abenza le podcast, bayazi, njengoba ngangicabanga ekuqaleni ngaphambi kokuyizama, unephutha kakhulu.
Isiqephu ngasinye se-Planeta Cuñao podcast sigxile esihlokweni esithile, isihloko esihlaziywa ngokujulile yizo zonke izingxenye ze-podcast, okuthi, ngendlela, Bonke bavela kwaBetis futhi abamthandi kahle uPablo Motos. Iziqephu zihlala cishe ihora elingu-1.
I-Planeta Cuñado iyatholakala kuwo wonke amapulatifomu e-podcast, kusuka ku-Spotify kuya ku-Google Podcast kuya ku-Apple Podcast.
Akekho owazi lutho
Uma uthanda bobabili u-Andreu Buenafuente kanye no-Berto Romero, i-pocast ehlekisayo oyifunayo ibizwa ngokuthi Nobody Saba Nada, lapho isiqephu ngasinye sikhuluma ngesihloko esiphakanyiswe izethameli.
Le podcast itholakala kuzo zonke izinkundla zemakethe.
Intatheli u-Alex Barredo ishicilela i-podcast yansuku zonke kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu enezindaba ezithakazelisa kakhulu ngobuchwepheshe bebonke. Lezi zinhlelo zihlala imizuzu eyi-10 kuye kweyi-15 futhi zilungele ukuqala usuku ngezindaba ezithokozisayo ongazilalela ngenkathi ukhipha inja, uyothenga isinkwa ...
I-Mix.io pocast itholakala kuzo zonke izinkundla ze-podcast.
Njengoba ungaqagela kahle egameni layo, le podcast igxile ku-Apple, ikakhulukazi ku-iPhone ne-iPad. I-podcast iba maviki onke futhi isakazwa bukhoma ngesiteshi se-YouTube se-Actualidad iPhone.
I-Actualidad iPhone podcast itholakala kuzo zonke izinkundla ze-podcast.
I-podcast yobuchwepheshe eyenziwe yintatheli ye-El Mundo u-Ángel Jímenez de Luis, lapho kufika isivakashi esisha masonto onke ukuzokhuluma ngamadivayisi amasha ethulwe, sikhuluma ngezindaba ezibaluleke kakhulu zesonto ...
I-Binary iyi-podcast etholakala kuwo wonke amapulatifomu e-podcast.
Kakhulu ngesitayela se-podcast ye-Binaries, ku-Despeja la X ka-Xataka, isonto ngalinye bakhuluma ngezindaba zakamuva ezivela emhlabeni wobuchwepheshe lapho abahleli be-Xataka behlanganyela khona.
I-Clear the X iyatholakala kuwo wonke amapulatifomu e-podcast.
I-HistoCast iyi-podcast yomlando njengombuthano womphakathi otshela izehlakalo zomlando zamanje. Njengoba besho, abahlosile ukufundisa zonke iziqephu. Iziqephu ezingaphezu kuka-200 ezitholakalayo zisisondeza ezenzakalweni zakamuva kanye nomlando odlule.
Uma uthanda umlando, kufanele uzame le podcast. I-HistoCast pocast itholakala kuphela nge-iVoox.
Ku-Casus Belli History Podcast ungaphila umlando wempi wekhulu lama-XNUMX, lapho uzofunda khona ngezimpi ezibaluleke kakhulu, amasu, abantu nezikhali. Njengoba i-podcast yomlando, kuvamile ukuthola kule podcast abanye abanikeli be-HistoCast,
I-Casus Belli pocast itholakala kuphela nge-iVoox.
Iminyaka eyinkulungwane yesine
Uma ungenalo ithuba lokubona uhlelo luka-Iker Jímenez, ungamlandela nge-podcast yakhe esemthethweni, i-podcast etholakala kuwo wonke ama-podcast platform.
Uma uthanda imfihlakalo, kungenzeka ukuthi uzwile nge-podcast ye-DEX ephethwe ngu-Santiago Camacho, i-podcast onokwanelisa ngayo ilukuluku lakho ngezihloko eziyinqaba kakhulu manje naphakade.
I-Strange Days podcast itholakala kuphela ku-iVoox.
UCarlos Bustos usiyisa emhlabeni we-paranormal, wobumnyama, lapho imfihlakalo nokumangalisa kukhululekile. Lolu hlelo lutholakala kuphela nge-iVoox.
I-iVoox iyinkundla yesi-Spanish lapho singathola khona inani elikhulu lamaphodikasti akhethekile, ama-podcast atholakala kuphela kule nkundla, futhi siphathe ilebula ethi Okwangempela.
Abasebenzisi abafuna, bangakwazi ukusebenzisana ngokwezimali namaphodikasti, isici esitholakala iminyaka eminingana ku-iVoox futhi esisanda kuqala ukufinyelela ku-Spotify ne-Apple Podcast.
Uma usebenzisa i-iPhone, uhlelo lokusebenza i-Apple elenza litholakale kubo bonke abasebenzisi bendabuko ku-Apple Podcast, kuyilapho uma usebenzisa i-Android ungasebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Google Podcast (njengoba sibona, amagama oqobo).
Nokho, futhi unenketho yokusebenzisa i-Spotify uma usuvele usebenzisa le nkundla ukulalela umculo owuthandayo, noma izinhlelo zokusebenza zezinkampani zangaphandle ezifana ne-Pocket Casts, uhlelo lokusebenza olutholakala kokubili i-iOS ne-Android.
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Internet » Ama-podcasts angcono kakhulu ka-2021 azokuxhuma
Imidlalo engcono kakhulu yezingane rat
Imidlalo ye-Horror VR ongayithola kuma-consoles